ဒူဒူကြီး: "Oil Fired Drum Type Water Tube Boiler Automatic Control System"
"Oil Fired Drum Type Water Tube Boiler Automatic Control System"
ယေဘုယျအားဖြင့် boiler ရဲ့ automatic control system မှာ၊ water level control, alarm & monitoring system, steam pressure automatic control system, burner control system နဲ့ safety system တို့ပါဝင်ပြီး၊ ပုံမှန် အသုံးပြုနေကျ typical application အနေနဲ့ pneumatic နဲ့ electrical devices တွေကို primary devices အဖြစ်၊ တတ်ဆင်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ သဘေ်ာရဲ့ boiler ကဲ့သို့ closed pressurized vessel ထဲမှ ‘non - volatile fluid’ တနည်းအားဖြင့် 'ရေ' ရဲ့ water level control & monitoring system အတွက် differential pressure transmitter တွေကိုအသုံးပြုခြင်းဟာ၊ အသင့်လျှော်ဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ သဘေ်ာရဲ့ boiler တွေမှာ differential pressure transmitter တွေအဖြစ်၊ 'pneumatic differential pressure transmitter' နဲ့ 'electrical differential pressure transmitter' တွေကို၊ အသုံးပြုကြပါတယ်။
'Pneumatic differential pressure transmitter' - boiler drum ရဲ့ water level မှ ရရှိလာတဲ့ differential pressure ကို pneumatic signal အဖြစ် ပြောင်းလဲပြီး၊ (0.2~ 1 kg/ cm2 or0~ 1.4kg/ cm2) pressure input signal အနေနဲ့၊ level controller နဲ့ alarm & monitoring system သို့ပေးသွင်းပါတယ်။ pneumatic transmitter တွေဟာ၊ differential pressure measuring device ဖြစ်တဲ့အတွက် 'pneumatic DP cell' လို့လည်းခေါါပါတယ်။
pneumatic differential pressure transmitter တွေဟာ သဘေ်ာမှ၊ control air maximum (7.0kg/ cm2) pressure ပမာဏကို၊ air media အဖြစ် အသုံးပြုထားပါတယ်။ control air ကို transmitter အတွင်းရှိ၊ pressure regulator မှတဆင့် maximum (1.4kg / cm2) သို့မဟုတ် ( 20 psi) pressure အထိ ထပ်မံလျှော့ချပြီး၊ pneumatic input signal အနေနဲ့ ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။ transmitter ရဲ့ pneumatic output signal ကတော့ (0.2kg/ cm2 ~ 1. 05 kg/ cm2 ) သို့မဟုတ် (3 ~ 15 psi) pressure ပမာဏခန့်ရှိပါတယ်။
pneumatic differential pressure transmitter အသုံးပြုထားတဲ့ differential pressure measuring system ကို၊ "wet leg" system လို့လည်း၊ ခေါါကြပါတယ်။ 'ရေ' ကို non - volatile fluid အနေနဲ့ ဖြည့်သွင်းထားပြီး၊ impulse pipes လို့ခေါါတဲ့ tube အသေးလေးတွေကို၊ အသုံးပြုကာ၊ transmitter ရဲ့တဖက်ကို၊ steam ရှိနေမယ့် boiler drum ရဲ့ upper section တနည်းအားဖြင့် 'negative measuring point' ဖြစ်တဲ့ highest water level ရဲ့ အထက်နေရာနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး၊ transmitter ရဲ့ အခြားတဖက်ကိုတော့ 'ရေ' ရှိနေမယ့် 'positive measuring point' ဖြစ်တဲ့ lowest water level ရဲ့ အောက်နေရာနဲ့ ဆက်သွယ်ထားပါတယ်။
boiler drum ရဲ့ upper section ဟာ၊ water level အမြဲပြောင်းလဲနေမယ့် 'vary head' နေရာဖြစ်ပြီး၊ lowest water level ကတော့ water level တသမတ်တည်း ရှိနေမယ့် 'constant head' နေရာဖြစ်ပါတယ်။ boiler drum မှ၊ negative measuring point ဖြင့် ဆက်သွယ်ထားတဲ့နေရာဟာ၊ transmitter ရဲ့ low pressure side ဖြစ်ပြီး၊ positive measuring point ဖြင့် ဆက်သွယ်ထားတဲ့ နေရာကတော့၊ transmitter ရဲ့ high pressure side ဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Force - balanced type basic pneumatic differential pressure transmitter
transmitter ရဲ့ low pressure side နဲ့ high pressure side တို့မှာ၊ liquid filled diaphragm capsules လေးတွေ ထည့်သွင်းတတ်ဆင်ထားပါတယ်။ negative measuring point မှ fluid ဟာ၊ low pressure side သို့စီးဝင်ပြီး၊ low pressure diaphragm capsule အားရွှေ့လျှားစေသလို၊ positive measuring point မှ fluid ဟာလည်း၊ high pressure side သို့စီးဝင်ကာ၊ high pressure diaphragm capsule ကို၊ ရွှေ့လျှားစေပါတယ်။ liquid filled diaphragm capsules တွေရဲ့ ရွှေ့လျှားမှုမှတဆင့် force bar မှာ movement ဖြစ်ပေါါလာပါတယ်။ force bar ရွှေ့လျှားလှုပ်ရှားမှုဆိုတဲ့ movementကြောင့်၊ nozzle နဲ့ flapper ကြားမှ၊ cavity ဧရိယာမှာ အပြောင်းအလဲ၊ ဖြစ်ပေါါလာပါတယ်။
pneumatic input signal ဟာ nozzle ရဲ့ cavity ဧရိယာမှတဆင့် ထွက်ပေါါနေပြီး၊ nozzle gap သေးငယ်သွားတဲ့အခါ၊ nozzle မှ ထွက်နေတဲ့ 'လေ' ရဲ့ pressure မြင့်တက်လာသလို၊ feed back bellow ကိုလည်း ရွှေ့လျှားစေပါတယ်။ feed back bellow ရွှေ့လျှားမှုကြောင့်ပေါါပေါက်လာတဲ့ pressure ဟာ differential pressure ဖြစ်ပြီး၊ pneumatic relay မှ output signal အဖြစ်ထုတ်ပေးပါတယ်။
Fig. Boiler Automatic Control System with pneumatic DP cell
boiler drum ရဲ့ level sight glass မှာ 'ရေ' ပမာဏ (0 %) သာရှိစဉ်၊ transmitter မှ (0.2kg/ cm2) သို့မဟုတ် (3 psi) pressure output signal ကိုထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပြီး၊ boiler drum ရဲ့ level sight glass မှာ 'ရေ' ပမာဏ (100 %) ရှိတဲ့အခါ (1. 05 kg/ cm2) သို့မဟုတ် (15 psi) pressure output ထုတ်ပေးပါတယ်။ ရရှိလာတဲ့ pneumatic output signal ကို၊ pressure switch တွေဖြစ်တဲ့ boiler drum water high level alarm switch, boiler drum water low level alarm switch, boiler drum water low-low level alarm switch တနည်းအားဖြင့် burner cut-out switch တို့ကိုပေးပို့သလို၊ control room မှ၊ boiler drum water level monitoring unit/ indicator unit သို့လည်း ပေးပို့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် pneumatic output signal ကို၊ level controller သို့ input signal အဖြစ်ပေးပို့ပြီး၊ ရရှိလာတဲ့ signal ကို level controller မှာ၊ amplify အနေနဲ့ ချဲ့ယူကာ၊ reference signal အနေနဲ့ boiler feed water regulator သို့ ထပ်မံပေးပို့ပါတယ်။
'Electrical differential pressure transmitter' - နောက်ပိုင်းမှာတော့ pneumatic differential pressure transmitter DP cell တွေအစား၊ electrical devices ဖြစ်တဲ့ electrical differential pressure transmitter DP cell တွေကို၊ အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ differential pressure measuring device ဖြစ်တဲ့ electrical differential pressure transmitter DP cell တွေကို၊ capacitance based DP cell, strain - gauge based DP cell နဲ့ potentio-metric based DP cell ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားနိုင်သလို၊ boiler တွေရဲ့ automatic control system မှာ၊ capacitance based DP cell တွေကို၊ တတ်ဆင် အသုံးပြုကြပါတယ်။
Fig. capacitance based DP cell
capacitance based DP cell ဟာ၊ electrical capacitance device တခုဖြစ်ပြီး၊ dielectric oil အတွင်းနှစ်ထားတဲ့၊ metal သို့မဟုတ် metal - coated quartz diaphragm တွေပါကို၊ ထည့်သွင်းတတ်ဆင်ထားပါတယ်။ diaphragm metal အဖြစ်၊ stainless steel material ကိုအသုံးပြုလေ့ရှိပြီး၊ corrosive ဖြစ်လွယ်တဲ့ applications တွေ မှာတော့၊ high-nickel steel alloys တွေဖြစ်တဲ့၊ 'inconel' ဒါမှမဟုတ်၊ 'hastelloy' တို့ကို အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ chlorine, fluorine နဲ့ halogens ကဲ့သို့၊ gas applications တွေအတွက်၊ silver diaphragms တွေကို အသုံးပြုပါတယ်။
pneumatic DP cell ကဲ့သို့၊ capacitance based DP cell ရဲ့တဖက်ကို၊ steam ရှိနေမယ့် boiler drum ရဲ့ upper section တနည်းအားဖြင့် negative measuring point ဖြစ်တဲ့ highest water level ရဲ့ အထက်နေရာနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး၊ transmitter ရဲ့ အခြားတဖက်ကိုတော့ 'ရေ' ရှိနေမယ့် positive measuring point ဖြစ်တဲ့ lowest water level ရဲ့ အောက်နေရာနဲ့ ဆက်သွယ်ထားပါတယ်။ boiler drum မှ၊ negative measuring point ဖြင့် ဆက်သွယ်ထားတဲ့နေရာဟာ၊ transmitter ရဲ့ low pressure side ဖြစ်ပြီး၊ positive measuring point ဖြင့် ဆက်သွယ်ထားတဲ့ နေရာကတော့၊ transmitter ရဲ့ high pressure side ဖြစ်ပါတယ်။
Fig. DP cell installation
cell အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာတဲ့၊ pressure (၂) ခုတို့ဟာ၊ မတူညီတဲ့အတွက်၊ pressure difference ဆိုတဲ့ differential pressure ဖြစ်ပေါါလာပြီး၊ diaphragm မှာ ရွှေ့လျားမှု movement ဖြစ်ပေါါလာပါတယ်။ DP cell သို့၊ power supply ပေးသွင်းတဲ့အခါ၊ diaphragm movement ကြောင့် plates တွေမှာ capacitance တန်ဘိုး အပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါါပြီး၊ electrical output signal ကို ရရှိလာပါတယ်။ ရရှိလာတဲ့ output ဟာ (4 ~ 20 mA) current signal ဖြစ်ပြီး၊ (1 ~ 5V) voltage signal သို့ပြောင်းလဲယူပါတယ်။ capacitance based DP cell တွေကို၊ single plate capacitor နဲ့ two-plate capacitor DP cell ဆိုပြီး ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
single plate capacitor DP cell မှာ၊ stationary plate ကို diaphragm ရဲ့ အနောက်ဖက်မှာ တတ်ဆင်ထားပါတယ်။ diaphragm ရဲ့ movement လို့ခေါါတဲ့ diaphragm deflection ကြောင့် diaphragm နဲ့ stationary plate ကြားမှာ၊ variable capacitance တန်ဘိုးတခု ရရှိလာပါတယ်။ variable capacitance ဆိုတဲ့၊ capacitance တန်ဘိုးအပြောင်းအလဲကို၊ stationary plate မှရယူပြီး၊ DC current သို့မဟုတ် voltage signal အဖြစ်ပြောင်းလဲကာ၊ panel meters သို့မဟုတ် microprocessor - based input/ output boards တွေကိုပေးပို့ပြီး၊ ဖတ်ယူပါတယ်။
two-plate capacitor DP cell မှာတော့၊ stationary plate (၂) ခုကြားမှာ၊ diaphragm တတ်ဆင်ထားပြီး၊ high-frequency နဲ့ high-voltage oscillator တို့မှတဆင့်၊ stationary plates တွေကို၊ charge လုပ်ပါတယ်။ diaphragm deflection ကြောင့်ပေါါပေါက်လာတဲ့၊ capacitance တန်ဘိုး အပြောင်းအလဲကို၊ bridge circuit မှလက်ခံရယူပါတယ်။ bridge circuit မှာ balanced နဲ့ unbalanced mode တို့ပါဝင်ပါတယ်။
Fig. DP cell with micro capacitance silicon sensor
balanced mode ဟာ၊ differential pressure ကို၊ တိုင်းယူပြီး၊ ရရှိလာတဲ့ output တန်ဘိုးအား null detector လို့ခေါါတဲ့ comparator သို့ တိုက်ရိုက်ပေးပို့သလို၊၊ bridge circuit ကို၊ null ဆိုတဲ့ no value အနေအထားမှာ ရှိနေစေပါတယ်။ unbalanced mode မှာတော့၊ differential pressure ကြောင့်ရရှိလာတဲ့ output voltage တန်ဘိုးကို၊ excitation voltage နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီးမှ၊ pressure measurement ratio အဖြစ်၊ ပေးပို့ပါတယ်။ static pressure, over pressure နဲ့ temperature effects တို့ကြောင့်၊ DP cell ရဲ့ characteristics တွေ၊ ထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်၊ 'stability' နဲ့ 'reliability' ကောင်းမွန်စေရန်၊ 'micro capacitance silicon sensor' တွေကို၊ measuring cell ရဲ့ neck မှာထည့်သွင်း တတ်ဆင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။
Fig. Boiler Automatic Control System with electrical DP cell
pneumatic pressure transmitter အသုံးပြုထားတဲ့ boiler automatic control system ကဲ့သို့၊ electrical DP cell မှ ရရှိလာတဲ့ electrical output signal ကို၊ pressure switch တွေဖြစ်တဲ့ boiler drum water high level alarm switch, boiler drum water low level alarm switch, boiler drum water low-low level alarm switch တနည်းအားဖြင့် burner cut-out switch တို့ကိုပေးပို့သလို၊ control room မှ၊ boiler drum water level monitoring unit/ indicator unit သို့လည်း ပေးပို့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် electrical output signal ကို၊ level controller သို့ input signal အဖြစ်ပေးပို့ပြီး၊ ရရှိလာတဲ့ signal ကို level controller မှာ၊ amplify အနေနဲ့ ချဲ့ယူကာ၊ reference signal အနေနဲ့ boiler feed water regulator သို့ ထပ်မံပေးပို့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် boiler ရဲ့ drum water level တိုင်းတာရာမှာ pneumatic နဲ့ electrical DP cell တွေအစား၊ magnetic float တွေနဲ့ conductivity သို့မဟုတ် capacitance probes တွေကိုလည်း အသုံးပြုကြပါတယ်။ magnetic float တွေနဲ့ conductivity သို့မဟုတ် capacitance probes တွေဟာ၊ water level control နဲ့ alarm system အတွက်သာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ monitoring system, steam pressure automatic control system, burner control system နဲ့ safety system တို့အတွက်၊ အသုံးမပြုနိုင်တာ၊ တွေ့ရပါတယ်။
'Magnetic floats' - တွေကို၊ magnetic level controller အဖြစ်၊ chamber အတွင်းမှာ၊ တတ်ဆင်လေ့ရှိသလို၊ boiler shell အတွင်းသို့ ထည့်သွင်းပြီး direct mounted အနေနဲ့လည်း၊ တတ်ဆင်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ float ဟာ boiler ရဲ့ drum water level အပြောင်းအလဲပေါါမူတည်ပြီး၊ လိုက်ပါရွှေ့လျားနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Magnetic level controller inachamber
float ရဲ့ level signal output အတွက်၊ mercury type သို့မဟုတ် 'air-break' type magnetically operated switches တွေကို၊ အသုံးပြုလေ့ရှိသလို၊ magnet attached float ရဲ့ ရွှေ့လျှားလှုပ်ရှားမှု movement မှတဆင့် inductive coil မှာဖြစ်ပေါါလာတဲ့ modulating signal ကိုလည်း၊ အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် float မှ တဆင့် ရရှိလာတဲ့ level signal output ကို၊ relay သို့ပေးသွင်းပြီး၊ alarm system နဲ့ On / Off control system အနေနဲ့ boiler feed water pump အား၊ အလိုအလျှောက် မောင်းနှင်ရန် အသုံးပြုသလို၊ modulating level control system အဖြစ်၊ boiler automatic feed water regulating valve ရဲ့ opened/ closed operation အတွက် အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ float တွေဟာ၊ 'ရေ' နဲ့ အမြဲ ထိတွေ့နေရတဲ့အတွက်၊ ပျက်စီးမှု အနည်းနဲ့ အများ ဖြစ်ပေါါတတ်တာကိုလည်း၊ တွေ့ရပါတယ်။
'Conductivity probes' - တွေကို၊ single tip နဲ့ two tip probes ဆိုပြီး ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ insulation ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ metal rod အတွင်း၊ low voltage ဖြတ်စီးစဉ်၊ ပေါါပေါက်လာတဲ့ current တန်ဖိုး၊ အပြောင်းအလဲ မှတဆင့်၊ boiler ရဲ့ drum water level အား၊ တိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပြီး၊ smooth insulating material အဖြစ်၊ 'teflon' တနည်းအားဖြင့် PTFE ဆိုတဲ့ 'poly - tetrafluoroethylene' ကို၊ အသုံးပြုထားပါတယ်။
Fig. (A) - Conductivity probes arranged to switchafeed-pump on and off - two tip, (B) Conductivity probe inaclosed top tank
probe ဟာ ရေထဲမှာ immersed အနေနဲ့ နစ်မြုတ်ကာ၊ ထိတွေ့နေစဉ် circuit အတွင်း၊ current ဖြတ်စီးကာ၊ lifted out of the water အနေနဲ့ ရေနဲ့ မထိတွေ့တဲ့ အခါမှာတော့၊ current ဖြတ်စီးခြင်းမရှိတာကို၊ တွေ့ရပါတယ်။ prob မှ တဆင့် ရရှိလာတဲ့ level signal output ကို၊ relay သို့ပေးသွင်းပြီး၊ alarm system နဲ့ On / Off control system အနေနဲ့ boiler feed water pump အား၊ အလိုအလျှောက် မောင်းနှင်ရန် အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ drum water အတွင်းရောနှော ပါဝင်နေတဲ့ dirt တွေနဲ့ impurities တွေဟာ၊ probe ရဲ့ insulator အပေါါ ကပ်ငြိရာမှတဆင့်၊ drum water level တိုင်းတာရာမှာ၊ malfunctions အနေနဲ့ အမှားအယွင်းတွေ၊ ပေါါပေါက်တတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်၊ electrical conductivity operated အနေနဲ့ ဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်၊ conductivity အနေနဲ့5µ Siemens / cm ပမာဏထက်နည်းတဲ့၊ very pure water တနည်းအားဖြင့် 'ရေ'သန့်မှာ၊ အသုံးပြုလို့ မရတာကိုလည်း၊ တွေ့ရပါတယ်။
'Capacitance probes' - cylindrical probe ဖြစ်ပြီး၊ dielectric material ဖြစ်တဲ့ PTFE ဆိုတဲ့ 'poly - tetrafluoroethylene' ကို၊ conducting တနည်းအားဖြင့် first capacitor plate အဖြစ်အသုံးပြုကာ၊ boiler shell ကိုတော့ chamber wall တနည်းအားဖြင့် second capacitor plate အဖြစ် အသုံးပြုထားပါတယ်။ boiler ရဲ့ drum water level အပြောင်းအလဲကြောင့် second capacitor plate ရဲ့ ဧရိယာမှာ၊ အပြောင်းအလဲ၊ ပေါါပေါက်လာပြီး၊ overall capacitance တန်ဘိုးလည်း၊ လိုက်ပါပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ total capacitance ဆိုတာကတော့ capacitance above the liquid surface ဆိုတဲ့ boiler ရဲ့ drum water level အပေါါမှ capacitance တန်ဘိုး 'CA' နဲ့ capacitance below the liquid surface ဆိုတဲ့ boiler ရဲ့ drum water level အောက်မှ၊ capacitance 'CB' တန်ဘိုး တုိ့ရဲ့ ပေါင်းလဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Capacitance probe
ပြောင်းလဲသွားတဲ့ overall capacitance တန်ဘိုးဟာ၊ အလွန်သေးငယ်ပြီး pico farads လို့ခေါါတဲ့ 10-12 farads ပမာဏခန့်သာရှိတဲ့အတွက်၊ conjunction အနေနဲ့ အသုံးပြုကာ၊ output signal အဖြစ်၊ amplifier circuit သို့ ပေးသွင်းပါတယ်။ amplifier circuit မှရရှိလာတဲ့ output signal ကိုတော့ relay သို့ပေးသွင်းပြီး၊ alarm system နဲ့ On / Off control system အနေနဲ့ boiler feed water pump အား၊ အလိုအလျှောက် မောင်းနှင်ရန် အသုံးပြုသလို၊ modulating level control system အဖြစ်လည်း၊ အသုံးပြုပါတယ်။ conductivity probes တွေကဲ့သို့၊ drum water အတွင်းရောနှော ပါဝင်နေတဲ့ dirt တွေနဲ့ impurities တွေဟာ၊ capacitance probe ရဲ့ conducting plate အပေါါကပ်ငြိရာမှတဆင့်၊ drum water level တိုင်းတာရာမှာ၊ malfunctions အနေနဲ့ အမှားအယွင်းတွေ၊ ပေါါပေါက်တတ်ပါတယ်။
'Boiler safety system' - boiler ရဲ့ automatic control system မှ၊ water level control, alarm & monitoring system, steam pressure automatic control system, burner control system နဲ့ safety system တို့ဟာ၊ တခုနဲ့တခု ဆက်သွယ်နေပါတယ်။ burner ရဲ့ pre - purging period, ignition period, operating period နဲ့ post - purging period ဆိုတဲ့ operation sequence တွေ တိကျ မှန်ကန်မှသာ၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီး၊ boiler ရဲ့ efficiency ကိုလည်း အပြည့်အဝ ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
boiler safety system မှ routine start/ stop protection, fan motor & oil pump interlock protection, low/ high oil temperature, low oil pressure, high steam pressure, exhaust gas high temperature protection တို့ကို၊ အခြေခံ safety system တွေအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ low low/ lowest water level, missing fire & flame fault, manual emergency stop တို့ကတော့ မရှိမဖြစ်၊ အရေးကြီးတဲ့ safety system တွေဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Burner control system and Boiler Safety system
boiler ရဲ့ drum water level alarm ကို low water level နဲ့ low low water level သို့မဟုတ် lowest water level alarm ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားထားပါတယ်။ water drum အတွင်းသို့၊ feed water pump မှ၊ 'ရေ' မပေးသွင်းနိုင်တဲ့အခါ၊ drum water ဟာ၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ level မှနိမ့်ကျဆင်းသွားပြီး၊ low water level alarm အနေနဲ့ activated ဖြစ်ပေါါပါတယ်။ အကယ်၍ boiler ကို၊ automatic control system တနည်းအားဖြင့် auto-mode ဖြင့်၊ မောင်းနှင်လည်ပတ်နေပါက၊ low water level alarm activated ဖြစ်စဉ်၊ safety system မှ fuel oil supply ကိုဖြတ်တောက်ကာ၊ burner အားရပ်တန့်လိုက်မှာ၊ ဖြစ်ပါတယ်။ low water level alarm activated ဖြစ်စဉ်၊ manual mode ဖြင့် burner အား manual mode ဖြင့်၊ ပြန်လလည်မောင်းနှင်နိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ water drum အတွင်းမှ 'ရေ' ဟာ low water level ထက် ပိုမိုနိမ့်ကျတဲ့ low low water level သို့မဟုတ် lowest water level သို့ ကျဆင်းသွားကာ၊ lowest water level alarm activated ဖြစ်ပေါါလာတဲ့ အခါမှာတော့၊ manual mode ဖြင့်ပါမောင်းနှင်၍မရစေရန်၊ safety system မှ၊ ဖြတ်တောက်ထားပါတယ်။
SOLAS Regulation - Part C : Machinery installations - Regulation 32 မှာ၊ boiler အတွက် safety valve (၂) လုံး တတ်ဆင်ထားရမယ်လို့ ပြဌာန်းထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် low water level အခြေအနေ၊ flame fault/ flame failure ပေါါပေါက်တဲ့အခြေအနေနဲ့ အကယ်၍ boiler ရဲ့ water level control, alarm & monitoring system, steam pressure automatic control system, burner control system နဲ့ safety system တို့အတွက်၊ pneumatic pressure transmitter အသုံးပြုထားပါက၊ air supply ပြတ်တောက်သွားတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ၊ alarm activated ဖြစ်ပေါါပြီး၊ fuel supply အား အလိုအလျှောက် ဖြတ်တောက်နိုင်ရမယ်လို့ ပြဌာန်းထားပါတယ်။
propulsion အတွက်၊ steam အသုံးပြုမယ်ဆိုလျှင် boiler water drum high level alarm တတ်ဆင်ထားရန်လိုအပ်ပြီး၊ boiler feed water system ဟာ၊ အကြောင်းတစုံတခုကြောင့် အသုံးမပြုနိုင်ခဲ့လျှင်၊ မပြတ်တောက်စေရန် အရံအဖြစ်၊ နောက်ထပ် boiler feed water system တစုံသီးသန့် တတ်ဆင်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် boiler မှာအသုံးပြုတဲ့ feed water quality ကိုလည်း၊ အမြဲမပြတ်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပြီး၊ လိုအပ်သလို treatment ပြုလုပ်ပေးရန် ပြဌာန်းထားပါတယ်။ boiler water level ကို၊ gauge glass တွေမှတဆင့် ဖတ်ရှုနိုင်ရမှာဖြစ်သလို၊ အနည်းဆုံး gauge glass (၂) စုံ တတ်ဆင်ထားရန်၊ သတ်မှတ်ထားတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
Posted by ကိုထွန်း at 02:33